लकडाउनमा भैँसी दुहुदै सुन्दरी, २० बो’ल्ड अवतार ! | लकडाउनमा भैँसी दुहुदै सुन्दरी, २० बो’ल्ड अवतार ! – हिपमत
लकडाउनमा भैँसी दुहुदै सुन्दरी, २० बो’ल्ड अवतार !
बलिउडमा पुनम पाण्डेलाई समेत टक्कर दिन सक्ने शर्लिन चोपडाका केही तस्विहरु सामाजिक सञ्जालमा खुबै भाइरल हुँदैछन् । मान्छेहरु सामान्यतः उनलाई मोना चोपडाको रूपमा पनि चिन्ने गर्छन ।
उनी एक बलिउड अभिनेत्री मात्रै नभएर मोडल पनि हुन् । लकडाउनको समयमा उनले थरी थरीका पोजमा तस्विर सेयर गर्दै आएकी छिन् । उनका तस्बिरले निकै चर्चा पाएका छन् । उनका फ्यानहरूले उनको ह’ट अवा’तरको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् ।
उनका आर्कषक तस्विरका कारण चर्चामा रहने गर्छिन । अहिले पनि उनको भैंसीसँगको तस्विरले निकै भाइरल
चोपडाको जन्म हैदराबादमा भएको थियो । उनीले स्टेनले गर्ल्स हाई स्कूल र सेंट एन्न कलेज फर वूमेन, सिकन्दराबादबाट शिक्षा प्राप्त गरिन् । चोपडाले बलिउडमा केहि छोटा अभिनयहरूको साथमा अभिनयको शुरूआत गरिन् । उनी टाईम पास, रेड स्वस्तिक र गेम जस्ता चलचित्रहरूमा देखीएकी छिन् ।
उनको तेलुगू चलचित्रहरूमा पदार्पण ए फिल्म बाय अरविन्दबाट भयो। चोपडाले बिग बोसमा पनि भाग लिएकी थिइन् । उनी अक्सर उनका आर्कषक तस्विरका कारण चर्चामा रहने गर्छिन । अहिले पनि उनको भैंसीसँगको तस्विरले निकै भाइरल नै बने ।
हामीले उनका केहि सुन्दर तस्बिर इन्स्टाग्रामबाट लिएका छाैँ ।
मंगलबार, आषाढ ०२, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
फिल्म ‘कठपुतली’ अमेरिकाको ‘विन्टर फिल्म अवार्ड’का लागि छनौट
दोहोरीगीत प्रतिष्ठानको निर्णय,दुर्गेश थापालाई बहिष्कार गर्ने
‘मेरो प्रतिक’ कवितासङ्ग्रह र मञ्जु घिमिरे दाहाल
बोकेदाह्रीको नयाँ गीत ‘केराको थम्बा’ सार्वजनिक